एनआरएन एनसीसी चुनाव : :: Press Chautari ::
सुरक्षित अवतरणका लागि सार्नुको विकल्प के ?
गैरआवासीय अमेरिकी नेपालीहरुको संस्था एनआरएन एनसीसी युएसएको आसन्न चुनावको उल्टो गणनाक्रम सुरु भैसकेको छ । अप्रिल १६ देखि २० सम्म पाँच दिन लगाएर गरिने यो चुनाव जति जति नजिकिदैछ, त्यति त्यति नै यो थप पेचिलो बन्दै गएको छ । खासगरी आइसीसी सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिने न्युनतम योग्यतालाई लिएर सिर्जना भएको विवादको कारण समग्र चुनावकै माहौल प्रभावित भएको हो । अझ, आइसीसीले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट त ६ जना नयाँ उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी नै रद्द हुने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएकाले यसबाट समग्र चुनावको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने सम्भावना बढ्दो छ । आफूसँगै उम्मेद्वारी दिएकाको चुनाव हुने र एउटा खास पदमा उम्मेद्वार भैसकेकालाई चाँहि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्ने खालको यो परिस्थिति आफैंमा नैतिक हुदैन । यसबाट निर्वाचन आयोगलाई आइसीसी सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिएर पनि मान्यता नपाएकालाई अन्य पदमा उम्मेद्वारी दिन चाहे उनीहरुका लागि मार्गप्रशस्त गर्न चुनाव सार्नुपर्ने नैतिक दवाव स्वतः बढेको छ ।
संयुक्त राष्ट् संघको सहायक महासचिब स्तरको गरीमामय पदमा पुगेका डा. कुलचन्द्र गौतमको ट्बिुनलले स्पष्ट भाषामा एसीसीसीमा एक कार्यकाल पूरा नभएकाले आइसीसीमा उम्मेद्वारी दिन नसक्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब एनसीसी युएसएले आइसीसीसँग पौठेजोरी खेल्नुको कुनै अर्थ छैन । एनसीसी दर्ताका हिसावले स्वतन्त्र संस्था भए पनि आइसीसीको छातामुनि एक च्याप्टरका रुपमा छ । त्यसैले पनि आफ्नो तालुकवाला संस्थासँग जोरी खोज्न सक्दैन । यदि त्यसो गरियो भने नेपालको सन्दर्भमा गाउँ विकास समितिले स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णय मान्दिन भने जस्तै हुन्छ । र, त्यस्तो सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि कानुनको ठेली नै पल्टाइरहनु पर्दैन ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, धेरै विराला भए भने मुसा मार्दैनन् । अहिलेको एनसीसीको समस्या पनि त्यस्तै नै हो । अध्यक्ष खगेन्द्र जीसी आफैंमा सुपर लयर, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विनोद रोक्का एक अनुभवी कानुनविद्, विधान समितिका अध्यक्ष दुर्गा भुर्तेल अर्का कानुनविद , यतिका तीन-तीनजना कानूनविद् हुँदा पनि कानूनकै दफामा अल्झिएर जुन किसिमको असमञ्जस्य स्थिति सिर्जना गरियो, यो आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । यसले संख्या बढाएर उत्साहित बनेको एनसीसी युएसएमा अनपेक्षित निराशा र कुण्ठा थोपरिदिन सक्छ । यो नेतृत्वको अपरिपक्व निर्णय क्षमता र सोचको परिणाम हो । अझ कतिपयले त यसमा चुनावी लाभहानीको अंकगणित पनि देखेका छन् । जब परिस्थिति नै यस्तो सिर्जना हुन पुग्छ, तब शंका गर्नेले ठाउँ पाउँछन् र कहिलेकाँही शंकाले लंका जलाउन पनि सक्छ ।
पछिल्लो अवस्थामा निर्वाचन आयोगका मुख्य आयुक्त विनोद रोक्काले विधान समितिका संयोजक दुर्गामणि भुर्तेललाई एनसीसीको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका छन् । त्यसको जवाफ आएपछि नै एउटा निर्णयमा पुगेर निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्ने छ । तर दुर्भाग्य, निर्णय जे आए पनि अब चुनाव विवादमुक्त भने हुँदैन । किनकि, लाभ र हानीका आधारमा चुनावलाई विवादमा तान्न दुबै पक्ष तयार छन् । र, उनीहरुलाई वादी प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अगाडि बढाउनेहरुको पनि यहाँ कमी छैन ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा अब कमभन्दा कम विवाद हुने र सम्भव भएसम्म सबैको जीत हुने निर्णय के हुन सक्छ त ? सबैले त्यतातिरै सोच्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको फेस सेभिंग गर्दै सुरक्षित अवतरण (सेफ ल्यान्डिंग) गर्नु नै वुद्धिमानी हुन्छ । तर, सेफ ल्यान्डिंग कसरी गर्ने ? आफैंमा यो एउटा जटिल प्रश्न छ, मात्र आइसीसीले मानेन, त्यसैले आइसीसीका लागि एनसीसीमा एक कार्यकाल पूरा नगरेकालाई तपाईहरु उम्मेद्वार हुन पाउनु हुन्न भनेर मात्र समस्याको समाधान निस्कदैन । यदि त्यसो हो भने किन उनीहरुको उम्मेद्वारी स्वीकार गरियो भन्ने प्रश्न उठ्छ ? स्वीकार नगरेको भए उनीहरु अर्कै पदमा उम्मेद्वारी दिन सक्थे या उम्मेद्वार नै हुँदैनथे, उनीहरुका सामु लोकतान्त्रिक विकल्पको अवसर रहन्थ्यो । जानेर नजानेर विधानको आफ्नै ब्याख्या गरेर त्यो अवसरबाट उनीहरुलाई बञ्चित गरियो । अब अहिले आएर अर्को पदमा उम्मेद्वारी दिने अवसर नै दिइयो भने पनि उनीहरुले चुनाव प्रचारप्रसारको समय पाउँदैनन् । त्यसैले अरु प्रतिस्पर्धी सरह चुनाव प्रचार गर्ने अवसर नपाएको अर्थमा उनीहरुलाई त्यो प्रतिस्पर्धामा उतार्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन्छ । तर, यसमा जसको उम्मेद्वारीलाई मान्यता नदिइने अवस्था सिर्जना भएको छ, उनीहरुले ठूलो मन देखाउँदै आफूहरुलाई आइसीसीको निर्णय मान्य छ भनेर चुप लागिदिए भने समस्याको सबैभन्दा सहज हल निस्कन्छ । तर, अमेरिकी नेपाली डायस्पोरामा तातेको पछिल्लो चुनावी तावाले त्यो अवसर दिन्छ भन्न सकिन्न ।
यस्तो अवस्थामा निश्चित समय दिएर उनीहरुलाई नयाँ पदमा उम्मेद्वारी दिने अवसर दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने यो चुनावी विवादको आकार स्वभावतः अलि सानो हुन्छ र त्यसबाट आइसीसीसँगको सम्वन्ध पनि सुमधुर हुन सक्छ ।
यदि त्यसो गर्नतिर नलागेर आइसीसीसँग जोरी खोज्नतिर लागियो भने त्यसले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको गैरआवासीय अभियान फेरि पनि रबिन्सन क्रुसोको टापु हुन सक्छ । त्यसले विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीसँग भावनात्मक रुपले जोड्नेभन्दा पनि भौगोलिक रुपले छु्ट्याउने काम गर्छ ।
कुनै पनि नेतृत्वको परीक्षण यस्तै अप्ठ्यारो बेलामा हुने हो । सजिलो बेलामा त जो कसैले पनि संंस्था हाँक्न सक्छन् । यस्ता चुनौतिका पहाडलाई अवसरको मैदान बनाउनेहरु नै नेता कहलिन्छन् । परिस्थितिले अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीका अगुवाहरुलाई त्यो अवसर प्रदान गरेको छ । अब हेर्नुछ, चुनौतिलाई अवसरमा बदलेर सुनौलो इतिहास लेख्छन् या एनआरएन युएसएलाई अर्को विवादको कुरुक्षेत्र बनाएर कौरवको जस्तो विनासकारी कालो इतिहास रच्छन् । त्यसका लागि अब केही सकसपूर्ण घण्टाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । परिणाम जे भए पनि त्यो समय पेचिलो हुनेछ ।
तस्बिर: सहदेव पौडेल
सोमवार, २०७१ चैत्र २९ गते ०३:१३ / Monday, Apr 13, 2015 3:13 am